फेसबुकले किन माग्दैछ नाङ्गो फोटो ? - Postmandu
2018-05-24 PostmanduLeaveaComment on फेसबुकले किन माग्दैछ नाङ्गो फोटो ?
एजेन्सी, १० जेठ । बेलायती प्रयोगकर्ताहरुलाई फेसबुकले निःवस्त्र तस्वीर पठाउन भनेको छ। यो बदलाको भावनाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिने अन्तरंग पलका तस्वीरहरुलाई रोक्ने कोशिसका लागि गरिएको बताइएको छ।
यदि तपाईलाई लाग्छ कि कसैले तपाईको अन्तरंग तस्वीर पोस्ट गर्न सक्दछ र यो कुरालाई लिएर तपाई निराश हुनुहुन्छ भने यसो गर्दा उक्त फेसबुक प्रयोगकर्तालाई ब्लक गर्न सकिनेछ ।
यही प्रकारको प्रविधिको प्रयोग बालबालिकाका साथ भएको दुर्व्यवहारवाला तस्वीर पोस्टिङ्ग रोक्नका लागि पनि गरिँदैछ । फेसबुकले यो तरिकाको प्रयोग अस्ट्रेलियामा गरेको थियो र अब यो बेलायत, अमेरिका र क्यानडामा प्रयोग गर्ने कोशिस भइरहेको छ। फेसबुकका एक प्रवक्ताले बीबीसी न्युजसँग भने कि बेलायतका नागरिकहरुका लागि यो खुल्ला प्रस्ताव हो ।
फेसबुकले यसको कुनै जानकारी दिएको छैन कि अस्ट्रेलियामा यो प्रयोग कस्तो रह्यो । प्रयोग गरिएको थियो तर मानिसहरुको विश्वास जित्नका लागि यो एउटा आवश्यक काम हो ।
के तपाई फेसबुकलाई आफ्नो अन्तरंग तस्वीर पठाउनका लागि तयार हुनुहुन्छ ? के तपाई यसलाई लिएर आश्वस्त हुनुहुन्छ कि उक्त तस्वीरका साथ पूरा संवेदनशीलता देखाएने छ र कसैलाई बाँडिने छैन ?
यो आइडियाले कसरी काम गर्छ ?
यदि तपाई कुनै तस्वीरबाट तनावमा हुनुहुन्छ भने फेसबुकले सल्लाह दिनेछ कि तपाई आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गर्नुस् । बेलायतमा बदलाको भावनाबाट अन्तरंग तस्वीर शेयर गर्नेविरुद्ध उजुरी गर्नका लागि हेल्पलाइन छ । हेल्पलाइनमा उजुरी गरेपछि स्टाफले फेसबुकसँग सम्पर्क गर्छ र एउटा लिंक पठाइन्छ, जसमा फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निःवस्त्र तस्वीर कस्ले हेर्नेछ ?
फेसबुकका ग्लोबल प्रमुख अफ सेफ्टी एंटिगोन डेविसले न्युवबीटसँग भने कि फोटोलाई पाँच जनाको एउटा समूहले हेर्नेछ । यो पाँचै जना प्रशिक्षित समीक्षक हुन्छन् । सबै तस्वीरलाई एउटा विशेष डिजिटल फिंगरप्रिन्ट दिइन्छ र यसलाई हैश भनिन्छ ।
यसपछि डाटाबेसका रुपमा एउटा कोड स्टोर गरिन्छ । यदि कसैले सोही तस्वीर पोस्ट गर्ने कोशिस गरे उक्त कोडले रोक्नेछ । र फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जरमा आउनुअघि नै ब्लक हुनेछ ।
यो आइडियाले काम गर्ला ?
एंटिगोन डेविसले स्वीकार गरे कि यसको सतप्रतिशत ग्यारेन्टी भने छैन । उनका अनुसार तस्वीरलाई तलमाथि गरियो भने ओरिजिनलभन्दा फरक हुन्छ । यद्यपि उनकाअनुसार यसलाई अरु प्रभावकारी बनाउने कोशिस जारी छ।
एंटिगोन भन्छिन् कि पूरा मामिला यो कुरामा निर्भर गर्दछ कि तपाईसँग त्यो फोटो छ र तपाई त्यसबाट तनावमा हुनुहुन्छ । उदाहरणका रुपमा तपाईको एक्स आफ्नो मोबाइलबाट जुन तस्वीर अपलोड गर्दछ र त्यो फोटो तपाईसँग छैन भने यो आइडिया बेकार छ । -बीबीसीबाट
हामी सन्दीप लामिछाने उत्पादन गरिरहन्छौंः ओली
जहाँ सिकाइन्छ लभ गर्ने तरिका
फेसबुकबाट डाटा चोर्ने कम्पनी बन्द